मार्क जुकरबर्गले सफलता हासिल गर्नुको रहस्य – PanchKhal Online
Home/अन्तर्राष्ट्रिय/मार्क जुकरबर्गले सफलता हासिल गर्नुको रहस्य
आत्मविश्वास : सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आत्मविश्वास र दृढता हो । तपाईं सँग आत्म विश्वास छ भने तपाईं हरेक काममा सफलता पाउनु हुन्छ ।
आफूमा भएको क्षमता चिन्नुस : आफ्नो अवमूल्यन नगर्नुहोस् । आफूले गरेको कामलाई कहिल्यै सानो नसोच्नुहोस् । आफ्नो कामलाई ‘युनिक’ सोचेर अगाडि बढ्नुहोस् ।
कामप्रतिको लगाव : मानिसहरूले तपाईंको बारेमा के भन्छन् भन्ने कुरालाई ठुलो विषय नबनाउनुस्, तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुस् । आफ्नो काम प्रति विश्वास गर्नुस । सहि काम गर्नुस् ।
सहि निर्णय : आफूलाई प्रश्न सोध्नुहोस् की म के गरिरहेको छु ? कुन आफ्ना लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ? आफूलाई नै आफ्नो कामको महत्व थाहा छैन वा त्यो काम महत्वपूर्ण लागिरहेको छैन भने त्यो काम सफल पनि हुनै सक्दैन । त्यसैले कामको महत्व बुझ्दै सहि निर्णय लिनुस् ।
समयमै काम गर्नुस् : छिटो दौडिनुहोस् । छिटो काम गर्ने सोच बनाउनुहोस् । जबसम्म तपाईं छिटो दौडिनुहुन्न र काम गर्नुहुन्न, तपाईंले गरेको कामको कुनै महत्व नै हुँदैन । समयमै काम गर्नुहोस् । अन्यथा त्यसले समस्यामा पार्न सक्छ ।
प्रतिबद्धता : कामका लागि प्रतिबद्धताहरू बनाउनुहोस् । ती प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्नुहोस् । यसले तपाईंलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
चीनको सीमा भोलिबाट बन्द, विदेशीलाई प्रवेश रोक